England Trip | GO & GO Travels
London – Windsor – Bath – Oxford – York – Newcastle – Edinburgh – London ( 10 Days /9Nights )
Day (1) : Yangon – London - Departure Day to London
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ( ဝ၉း၅ဝ )အချိန်တွင်၊ ထိုင်းအဲဝေးလေယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွါ ပါမည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ သုဝဏ္ဏဘုံမိလေဆိပ်သို့နေ့ လည် ( ၁၁း၄၅ )တွင် ရောက်ပါမည်။ ၄င်း လေဆိပ်မှ ( ၁၂း၅ဝ ) အချိန်တွင် ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။ လန်ဒန်မြို့ သို့ညနေ ( ၁၈း၅၅ ) တွင် ရောက်ပါမည်။ လေဆိပ်တွင် ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပြီး၊ ညနေစာစားရန် စားသောက်ဆိုင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။ ပြီးနောက် ဟိုတယ်သို့ပို့ ဆောင် check in လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါ သည်။ လန်ဒန်မြို့ တွင် ညအိပ်ပါမည်။Depart from Yangon International Airport, by TG - 304 (09:50) am. Arrive at Suvannabomi Airport (11:45) am, continue depart to London by TG – 915 (12:50) pm. Arrive at London airport (18:55) pm. Meet & greet by guide, Dinner at local restaurant . After dinner transfer to hotel check in hotel and overnight in London. Hotel : Ibis Style London Exce ( or ) Similar.
Day (2) : London – Windsor – London (B / L / D)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှ လာရောက်ကြိုဆိုကာ လန်ဒန်မြို့ကိုစတင် လည်ပတ်ပါမည်။ လည်ပတ်မည့် နေရာများမှာ – Big Be, Trafalgar Square , House of Parliament, Westminster Cathedral, Downing Street, White Hall, Buckingham Palaceတို့ကိုလေ့ လာလည်ပတ်ပြီးနောက် နေလည်စာ ကို သုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက်Windsor မြို့ ရှိWindsor ရဲတိုက် သို သွားရောက်လေ့လာလည်ပတ်ပါမည်။ ညနေပိုင်း တွင် လန်ဒန်မြို့သို့ ပြန်ပါမည်။ ညနေစာကို လန်ဒန်မြိုရှိ ထိုင်းစားသောက်ဆိုင်တွင် သုံးဆောင်ပါမည်။ လန်ဒန်မြို့တွင် ညအိပ်ပါမည်။ Hotel : Ibis style London Exce (Or ) Similar
Hotel : Ibis style London Exce (Or ) Similar
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဧည့်လမ်းညွှန်မှလာရောက်ကြိုဆိုကာ Canterbury &dS Canterbury Cathedral သို့ သွားရောက်လေ့ လာလည်ပတ်ပါမည်။ နေ့ လည်စာကို သုံးဆောင်ပြီးနောက်ူနနျိ ဃျေအနူ သို့သွားရောက်လေ့ လာလည်ပတ်ပြီးနောက် လန်ဒန်မြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါကာ လန်ဒန်မြို့ရှိ လန်ဒန်တာဝါ နှင့် Jewels သို့ သွားရောက် လည်ပတ်ကာ ဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါမည်။ ညနေစာကို လန်ဒန်မြိုရှိ တရုတ်စားသောက်ဆိုင်တွင် သုံးဆောင်ပါမည်။
လန်ဒန်မြို့တွင် ညအိပ်ပါမည်။Hotel : Ibis Style London Exce ( or ) Similar
Day (4) : London – Stonehenge – Bath – Bristol (B / L / D)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှ Check out လုပ်ကာ Stonehenge မှတဆင့် Bathသို့ ကားဖြင့်ထွက်ခွါပါမည်။Bath သို့ရောက်လျှင် နေ့ လည်စာသုံးဆောင် ပါမည်။ ပြီးနောက်Roman Bath Museum ကို လည်ပတ်လေ့လာပြီးနောက်၊ Bristol သို့ဆက်လက်ထွက်ခွါပါမည်။ Bristol တွင် ညအိပ်ပါမည်။ Hotel : Holiday Inn Bristol Walton Hotel ( or ) Similar
Day (5) : Bristol – Oxford – Stratfort Upon - Avon (B / L / D)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှ Check out လုပ်ကာ Oxford သို့ကားဖြင့် ထွက်ခွါပါမည်။ Check out သို့ ရောက်လျှင် ဆက်တည်း Christchurch College သို့သွားရောက်လေ့လာလည်ပတ်ပြီးနောက် နေ့ လည်စာကို သုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက်ှအမအ်ေသမအ သို့ ထွက်ခွါကာStratfort ရှိShakespeare’s Birthplace ကို လေ့ လာလည်ပတ်ပါမည်။ ညနေစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် တွင် ဗလသည ညအိပ်ပါမည်။ံHotel : The Collection Walton Hotel ( or ) Similar
Day (6) : Stratfort Upon - Avon - York (B / L / D)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှ Check out ကားဖြင့်ထွက်ခွါပါမည်။့ သမု သို့ ရောက်လျှင် နေ့ လည်စာကိုသုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက့် သမု ဃငအပ ကို စတင်လည်ပတ်ပါမည်။ လည်ပတ်မည့်နေရာများမှာ –့ York Minster , City Hall, Clifford Tower, တို့ ကိုလည်ပတ်ပြီးနောက် ညနေစာကို သုံးဆောင်ပါမည်။ York တွင် ညအိပ်ပါမည်။ံHotel : Holiday Inn ( or ) Similar
Day (7) : York – Newcastle – Ediburgh (B / L / D)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ ဟိုတယ်မှ Check out လုပ်ကာEdiburghသို့ ကားဖြင့် ထွက်ခွါပါမည်။ လမ်းတွင် NHadrian’s Wall ကို ဖြတ်သန်းမောင်းနှင်မှာဖြစ်ပါ သည်။ တွင်ရှိသော Newcastle ကို ရောက်လျှင် နေ့ လည်စာသုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက် တဆက်တည်းEdiburghသို့ ဆက်လက်ထွက်ခွါပါမည်။ ညနေစာကိုEdiburghတွင် သုံးဆောင်ပါမည်။Ediburghတွင် ညအိပ်ပါမည်။Hotel : Holiday Inn City West ( or ) Similar
Day (8) : Ediburgh (B / L / D)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊Ediburgမို့ ကို စတင်လည်ပတ် ပါမည်။ လည်ပတ်မည့်နေရာများမှာ –Royal Mile, Prince’s Street Gardens, Royal Botanic Garden, Palace of Holyrood များ ကို လည်ပတ်လေ့ လာပြီးနောက် နေ့ လည်စာကို သုံးဆောင်ပါမည်။ ပြီးနောက်Ediburg Castle ကို သွားရောက်လေ့လာကြပါမည်။ ပြီးနောက် ပျော်ပျော်ပါးပါး ဈေးဝယ် ထွက်ကြပါမည်။Ediburgတွင် ညအိပ်ပါမည်။ံHotel : Holiday Inn City West ( or ) Similar
Day(9) : Ediburgh (B / L / D)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Ediburgh မြို့ မှ ၂ နာရီခန့် မောင်းရသည်ူLoch Lomond ကို သွားရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ နေ့ လည်စာကို သုံးဆောင်ပြီးနောက် နာမည်ကျော် စကော့စီစကီ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ရိုးရာ အတို င်ြး ပသနေသော Scotch Whisky Heritage သော နေရာကိုလေ့လာလည်ပတ်ပြီးနောက် ညနေစာကို သုံးဆောင်ကြပါမည်။ Ediburgh တွင် ညအိပ်ပါမည်။ံHotel : Holiday Inn City West ( or ) Similar
Day(10) : Departure Day ( B)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်၊ check out ကာ လေဆိပ်သို့ ပို့ ဆောင်ပေးပါမည်Ediburghြ လေဆိပ်မှ လန်ဒန်မြို၊ ဟီသရိုးလေဆိပ်သို့ ထွက်ခွါကာတဆက်တည်း ၊ ရန်ကုန်မြို့ သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။
Child Fare : 3100 USD without bed ( Under 12 years old ).
3~4* Hotel with daily breakfast